लक्ष्मी शर्मा | गृहपृष्ठ
Home Archives by: लक्ष्मी शर्मा
लक्ष्मी शर्मा Articles 28
बीमा कम्पनीलाई पूँजी वृद्धिको चटारो
on: June 16, 2019 लगानी
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीवृद्धिको चटारो परेको छ । बीमा समितिले दिएको अन्तिम म्याद असार मसान्तसम्म भएकाले यी कम्पनीलाई पूँजी वृद्धिको चटारो भएको हो । कम्पनीहरूले बोनस शेयर र हकप्रद श...	बिस्तृतमा
के हो अन्तरिम लाभांश ? कम्पनीले किन दिन्छन् अन्तरिम लाभांश ?
on: June 09, 2019 लगानी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष पूरा नहुँदै बीचमै कम्पनीले आफ्नो शेयरधनीलाई दिने लाभांशलाई अन्तरिम लाभांश भनिन्छ । सामान्यतया कम्पनीले नियामक निकाय र वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएको लाभांशमात्र शेयरध...	बिस्तृतमा
on: June 02, 2019 मुख्य खबर, लगानी
काठमाडौं । २५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने तयारीमा छन् । वाणिज्य बैंक, फाइनान्स, विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जाने तयारी गरेका हुन् । मर्जरका लागि कतिपय कम्पनी साधा...	बिस्तृतमा
शेयर बजारमा मोफसलका महिलाको आकर्षण
शेयर बजारमा महिला सहभागिता बढ्दो छ । पछिल्लो समय उपत्यका बाहिरका शहरी क्षेत्रका महिला समेत शेयर बजारमा लगानी गर्न उत्साहित छन् । यसँगै उपत्यका बाहिर शेयर बजारमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।...	बिस्तृतमा
on: February 10, 2019 लगानी
काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकृत ७ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये २ कम्पनीले बीमा समितिले तोेकेको चुक्तापूँजी पु¥याएका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले उक्त चुक्तापूँजी पु¥...	बिस्तृतमा
३५ कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा : नगद लाभांशमा अधिकांशको जोड
on: September 23, 2018 लगानी
काठमाडौं । सूचीकृत ३५ कम्पनीले लाभांश वितरणको घोषणा गरेका छन् । उक्त कम्पनीहरूले आव २०७४/७५ को नाफा र रिजर्भ कोषबाट लाभांश वितरण गर्न लागेका हुन् । अधिकांश कम्पनीले अघिल्लो आवको भन्दा कम लाभ...	बिस्तृतमा
तीजको खर्च घटाएर पूँजीबजारमा लगानीको विकल्प
on: September 12, 2018 मुख्य खबर, लगानी
काठमाडौं । तीज मनाउने प्रचलन अलि भड्किलो र खर्चिलोे बन्दै गएको टिप्पणी समान्य भइसकेको छ । विगतमा तीजको दरखाने भन्ने दिन एउटा मात्रै हुन्थ्यो । चाडपर्वको पात्रोमा अभैm पनि एउटै दिन (यस वर्ष भ...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । असार मसान्तसम्ममा १५ निर्जीवन बीमा कम्पनीले कुल रू. १७ अर्ब ६३ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यो बीमाशुल्क अघिल्लो आवको तुलनामा १८ दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो आव...	बिस्तृतमा
निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ३३% वृद्धि
काठमाडौं । १५ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल नाफा ३३ प्रतिशत बढेको छ । सम्बन्धित कम्पनीको गत आवको चौथो वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो । नयाँ बीमा कम्पनीहरू अजोड इन्स्योरेन्स र सानिमा इन्स्...	बिस्तृतमा